Humboldt University of Berlin - Tacliinta Sare Abroad in Europe
gaabinta : Hub
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Humboldt ee Berlin
Qor at Humboldt University of Berlin
The Humboldt University of Berlin waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn ee Berlin, aasaasay on 15 October 1810 sida University of Berlin (Universität zu Berlin) by reformer u deeqsi Prussian waxbarashada iyo linguistWilhelm von Humboldt, model jaamacadda kuwaas oo si xoog leh ayaa saamayn jaamacadaha kale ee Yurub iyo reer galbeedka. From 1828 waxaa loo yaqaan Frederick William University (Friedrich-Wilhelms-Universität), iyo ka dib (aan rasmi) sidoo kale sida University den unter Linden ka dib markii ay meesha jooga daarta hore ee Prince Henry of Prussia (1726-1802) wixii walaalkiis, King Frederick II, dhisay isaga u dhexeeya 1748 iyo 1753 on waddo Unter Linden bohoshii. In 1949, waxa ay magaceeda u bedelay Humboldt University in sharaf of labada Wilhelm ay aasaasihii iyo Walaalkiis, geographer Alexander von Humboldt. In 2012, Jaamacadda Humboldt ee Berlin waxay ahayd mid ka mid ah jaamacadaha Jarmal kow iyo inuu ku guuleysto in Excellence Jaamacadaha Jarmal ah Initiative, tartan heer qaran ah jaamacadaha ay dawladda federaalka Jarmal abaabulay. Jaamacadda ayaa bartay 29 Nobel Prize ku guuleysatay oo waxaa loo arkaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan Yurub guud iyo sidoo kale mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan dunida oo dhan, waayo, fanka iyo culuumta.
Waxaan ku faraxsanahay in aad xiisaynayso waxbarasho ee Humboldt-Universität simistarka ama sanadka. Diversity aqoonta iyo kala duwanaanta ku barayay ay muhiim u yihiin fikradda Humboldtian waxbarashada. Ardayda International oo doonaya in ay qayb ka mid ah koorsada qaataan ugu Humboldt-Universitaet ama ku qoran shahaado halkan si gaar ah u soo dhaweyn. Waxay ka qayb qaataan khibrad iyo kuwa caalamiga ah aragtiyo waxbarasho in forum tacliimeed, siinta ardayda Humboldt fursad ah in la ogaado oo ku saabsan noocyada kale ee aqoonta iyo dhaqamada kale ee tacliinta sare. Waxaan ku qanacsannahay in aad awoodaan inay gaaraan natiijooyinka barashada aad u soo baxay in labada tacliin gaadhaan oo ay noqon doontaa dhaqan halka aadeen aqoonta hab Humboldt ah.
Fadlan la soco in ardayda caalamiga ah kuwaas oo aan qayb ka mid ah barnaamijka sarrifka ah iyo ma qaban deeq by dhaqaalihii Saami ahaan la aqoonsan yahay, kaliya la qoro karaa sida arday aan degree in xaalado gaar ah.
The shabakadaha socda jawaabi doonaa su'aalo badan oo tilmaan tilmaamaha si ay u sahamiyaan. Waayo, kuwa danaynaya in helitaanka aragti guud oo ku saabsan koorsooyinka ku bixiyeen in English in simistarka hadda, dhekhso ah ka heli kartaa halkaan.
Kuliyadda Xisaabta iyo Sayniska Dabiiciga ah (Juqraafiga, Sayniska kombiyuutarka, xisaabta, Chemistry, physics)
Kuliyada Life Sciences (Beeraha iyo Beeraha, Biology, Psychology)
Kuliyada Philosophy waxaan (Philosophy, taariikhda, Ethnology Yurub, Department of Library iyo Science Information)
Kuliyada Philosophy II (Suugaanta, Luuqadaha, Studies Scandinavian, literatures Romance, Ingiriisi iyo Studies Maraykanka, Slavic Studies, Qadiimiga ah Philology)
Kulliyadda Humanities iyo Social Sciences (Social Sciences, Cultural Studies / Arts, Studies Asian / Afrika (waxaa ka mid ah arkiyoologiga), Studies Gender, Sport sayniska, RehabilitationStudies, Waxbarasho, Maamulka Tayada Waxbarashada)
ayuu semester ugu horeysay ee jaamacad Berlin cusub ee la aasaasay ka dhacay 1810 la 256 ardayda iyo 52 macalimiinta in Caqlina sharciga, daawo, fiqiga iyo falsafada hoos Raktarka Theodor Schmalz. Jaamacadda ayaa guriga ahayd in badan oo ka mid ah aqoon yahanno weyn oo ka mid ah laba qarniyo soo dhaafay Germany ee, iyaga ka mid ah falsafo shakhsi ahaan ku salaysan Johann Gottlieb Fichte, fiqi Friedrich Schleiermacher, falsafo salaysan buuxda G.W.F. Hegel, theorist ka Romantic sharci Friedrich von Carl Savigny, Faylasuuf pessimist ku Arthur Schopenhauer, falsafo Ujeedada salaysan Friedrich Schelling, naqdiya dhaqanka Walter Benjamin, iyo physicists caanka Albert Einstein iyo Max Planck. The aasaasayaasha aragti Markis Karl Marx iyo Friedrich Somalisch ka qaybgalay jaamacadda, sida uu ku sameeyay Abwaan Heinrich Heine, ayaadse Alfred Döblin, aasaasaha structuralism Ferdinand de Saussure, unifier Jarmal Otto von BISMARCK, Shuuciga Party of aasaasaha Germany Karl Liebknecht, African American Pan Africanist W. Oo. B. Du Bois iyo midnimo Yurub Robert Schuman, iyo sidoo kale qalliin ee saameynta Johann Friedrich Dieffenbach qeybtii hore ee 1800. Jaamacadda waxay hoy u tahay 29 Kooxda ku guuleysatay Nobel Prize.
Dhismaha jaamacadaha cilmi-intensive Jarmal, sida Humboldt, adeegay sidii model ah hay'adaha sida Johns Hopkins University. dheeraad ah, waxaa la soo sheegayaa in “ee 'Humboldtian’ jaamacad noqday model ah inta kale ee Europe ay mabda dhexe isagoo ururka waxbaridda iyo cilmi shuqulka ardayba, shaqsi ama cilmiga.”
Waxa intaa dheer in dayada xoogga leh ee maadooyinka dhaqanka, sida sayniska, sharciga, falsafada, taariikhda, fiqiga iyo daawo, Jaamacadda Berlin sameeyey si koobi badan oo nidaamo sayniska cusub. Alexander von Humboldt, walaalkiis of aasaasihii William, dalacsiiyay barashada cusub. Iyadoo dhismaha xarumaha cilmi-baarista casriga ah ee qeybtii labaad ee cilmiga Century 19-ka mid ah cilmiga dabiiciga bilaabay. cilmi caan, sida farmashiyaha August Wilhelm Hofmann, jirka ee Hermann von Helmholtz, xisaabyahannada ah Ernst Eduard Kummer, Leopold Kronecker,Karl Weierstrass, dhakhtarrada Johannes Peter Müller, Albrecht von Graefe, Rudolf Virchow andRobert Koch, gacan ka warkiisii ​​sayniska University Berlin ee.
Muddadan of wayneeyo, Jaamacadda Berlin si tartiib tartiib ah ballaadhiyey daraan kulliyadaha kale ee horay u gaar ah ee Berlin. Tusaale ahaan lahayd Charité ah, ka Pépinière iyo Collegium Medico-chirurgicum. In 1717, King Friedrich aan dhisay gurigii karantiil for Belaayadii a irdaha magaalada,, taas oo 1727 waxaa rechristened by “askari boqorka” Friedrich Wilhelm: “Waxaa loogu yeedhi doonaa Charité guriga” (Waxaa lagu odhan doonaa Charité [Faransiiska Sadaqo]). by 1829 goobta noqday campus caafimaad University Berlin iyo si ilaa hadhay 1927 marka Hospital ayaa in ka badan oo casri ah University ayaa la dhisay.
Jaamacadda Berlin bilaabay ururinta taariikhda dabiiciga ah ee 1810, taas oo, by 1889 looga baahan yahay dhismaha gaar ah oo noqday Museum ee für Naturkunde. School caafimaadka xooluhu wuxuu usii, asaasay 1790 iyo nuugo jaamacadda, in 1934 sameeyay ku saleysan oo ka mid ah Xarunta Caafimaadka Xoolaha Medicine (Kaydi Kuliyada caafimaadka xoolaha). Sidaas University Beeraha ee Berlin (Beeraha University of Berlin), asaasay 1881 waxaa xiriir la leh kulliyadood Beeraha ee Jaamacadda.
Ka dib markii ay 1933, sida oo dhan jaamacadaha Jarmal, waxaa la saameeyeen taliskii Nazi. Raktarka ayaa inta lagu jiro xilliga this ahaa Eugen Fischer. Waxay ahayd maktabadda jaamacadda ee ah in qaar ka mid ah 20,000 buugaagta by “degenerates” iyo soo horjeeda ee Itobiya ayaa la geeyay in la gubo on May 10 ee sannadkan in Opernplatz ah (hadda Bebelplatz ah) waayo Banaanbaxa ilaaliyo by SA in sidoo kale kasoo muuqan khudbad by Joseph Goebbels. Taalladaas A in hadda laga heli karaa xarunta of laba jibbaaran, oo ka kooban furitaanka guddi galaas gal qol dhulka hoostiisa la caddaan doonaan meel shelf faaruq 20,000 Muga iyo huurada a, sita epigraphe ka ah 1820 shaqada by Heinrich Heine: “Taasi waxay ahayd oo kaliya Teegeero, halkaas oo ay gubi buugaagta, ay gubaan dadka dhamaadka” (“Tani waxa ay ahayd, laakiin Teegeero; halkaas oo ay gubi buugaagta, waxay ugu dambeyntii ku gubi dadka”).
Sharciga noolaynta of Service Civil Professional (Jarmal “Law noolaynta of Service Civil Professional”) keentay 250 Professor Yuhuudda iyo shaqaalaha la eryay inta lagu guda jiro 1933/1934 iyo doctorates badan la noqday. Ardayda iyo culimada iyo soo horjeeda siyaasadda ee naasiga ayaa laga saaray jaamacadda oo inta badan soo tarxiilay. Inta lagu jiro wakhtigan ku dhowaad hal saddexaad ee shaqaalaha oo dhan, ayaa rasaas by naasiga ah.
Maamulka Milatariga Soviet ee Germany (SMAD) amar ku bixiyay (tirada Command. 4) furitaanka jaamacadda ee January 1946. SMAD The doonayay a University uqaabaynta Berlin ku salaysan model Soviet, si kastaba ha ahaatee way ku sii adkeeyeen on Oraah ah “cusub ee la furay” oo aan “dib-u-furay” sababo siyaasadeed. Madaxweynaha Maamulka Jarmal Dhexe ee Waxbarashada Qaranka (DZVV), Paul Wandel, in cinwaanka uu January ee 29, 1946, xafladii furitaanka, ayaa sheegay in: “Waxaan ka hadlay furitaanka, oo ma aha kuwa dib-u-furitaanka jaamacadda. The University of Berlin waa in si waxtar leh u bilowdo mar kale in ku dhow kasta jidka. Waxaad aad ka hor leeyihiin image this ee jaamacadda jir. Maxaa weli ah waa baabba ', laakiin burbur ah.” baridda ayaa waxaa ku koobnayn toddoba waaxyaha ka shaqeeya dib u furmey, dhismayaasha dagaal-burburay, iyadoo dad badan oo ka mid ah macalimiinta dhintay ama ka maqan. Si kastaba ha ahaatee, by simistarka jiilaalka ah 1946, Kulliyadda Dhaqaalaha iyo Waxbarashada Sciences ayaa dib loo furay.
The Workers iyo beeralay Kulliyadda (Jarmal: Workers 'iyo beeralay' Kuliyada) (ABF), barnaamij waxbarasho loogu talagalay ragga dhallinyarada ah, ay sabab u tahay sababo siyaasadeed ama jinsiyadda, ayaa dulman hoos naasiga ah, waxaa la aasaasay jaamacadda waqtigaan. Barnaamijkan jiray at University Berlin ilaa 1962.
Ma rabtaa wada hadlaan University Humboldt ee Berlin ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Humboldt University of Berlin rasmiga ah Facebook
Humboldt University of dib u eegista Berlin
Ku biir si uu ugala hadlo ee Humboldt University of Berlin.